China Dongshen elu mma eke siri ike abụọ gbalaga ewi ntutu resin aka omenala logo ikom mmiri ịkpụ afụcha emeputa na Supplier | Dongmei
Dongshen elu mma eke siri ike abụọ gbalaga badger ntutu resin aka omenala logo ikom mmiri shaving ahịhịa
Ahịhịa ịcha afụ ọnụ Dongshen ejiri aka ya kee ya bụ eriri bajị abụọ na aka resin. Eji ya mee ka ajị agba dị nro tupu ịkpụ afụ ọnụ, na -enweghị mgbakasị ahụ. Enweghị ntutu isi ọ bụla, enweghị mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa, na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị.
Na -emeso onwe gị na nkasi obi okomoko nke ahịhịa ịkpụ afụ ọnụ kacha mma nke Dongshen
Akụrụ ọnụ ihe Badger hair (baji abụọ).
Aka ihe Remmehie mmehie ma ọ bụ ahaziri
Brush Ahịhịa e ji aka mee nwere ntutu bisiki 100% abụọ - Oke dịkwa oke. Ọmarịcha ahịhịa ịkpụ afụ ọnụ nke ụmụ nwoke, mana ọ masịkwara ụmụ nwanyị!
Soap Na -eji ncha ịcha afụ kacha amasị gị. Ntutu Badger anyị kachasị mma bụ baajị abụọ kacha mma. na eriri ahịhịa anyị ejiri aka mee ga -adịru ọtụtụ afọ mgbe ejiri lekọta ya nke ọma.
Nke gara aga: Akara Dongshen nkeonwe n'ahịa resin omenala na -ejikwa eke eke kacha mma baajị ntutu ọkachamara ịkpụ afụ ọnụ
Osote: Dongshen omenala omenala onwe labelụ elu mma softti silvertip badger ntutu resin aka nwoke ihu shaving ahịhịa.
Elu àgwà nro na ala vegan synthet ...
Ala okomoko abụọ gbalaga ewi ntutu ntutu ...
Sịntetik ahịhịa ntutu eriri dị ọcha Black Plastic Ha ...
Dongshen N'ogbe onwe labelụ omenala senti ...
Dongshen N'ogbe eco-enyi na enyi omenala inogide ...
Ọkachamara ọkachamara ọkachamara 16pcs etemeete ahịhịa s ...
Ịkpụ afụ ọnụ, Mee Ncha, Nịm etemeete ahịhịa, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, etemeete ahịhịa setịpụrụ, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ,